Sikuxelela ukuba yintoni i-edamame, iipropathi zayo kunye nendlela ethathwa ngayo | Ukutya kukaNutri
Sikuxelela ukuba yintoni i-edamame, iipropathi zayo kunye nendlela ethathwa ngayo
Edamame utshayela amakhaya abantu abaninzi. Mhlawumbi awuyazi ncam ukuba yintoni le nto ityiwayo, ukuba yintoni iipropathi zayo okanye ukuba ityiwa njani ngokuchanekileyo. Sukuba nexhala, apha ngezantsi, siza kukuxelela yonke into ngokweenkcukacha.
Ukusetyenziswa kwesoya kuyanda, kunwenwe kwihlabathi liphela. I-Edamames kukutya okunempilo, Zityebile kakhulu kwizakhamzimba kwaye zilungele ukuzenza njengeqhekeza elisempilweni.Los edama livela kwiimbotyi zesoya, igama libhekisa kwisitya esenziwe ngezi iimbotyi zesoya eluhlaza, hayi imveliso ngokwayo. Oko kukuthi, iipods eziluhlaza azibizwa edamame Ukulungiselela kulula kakhulu, into ebangele ukuba abantu abaninzi bayazise ekutyeni kwabo.
1 Yintoni i-edamame?
2 Iipropathi ze-Edamame
3 Uyitya njani?
4 Uyithenga phi
I-Edamame ziipods okanye iimbotyi eziluhlaza zesoya, ziye zaqokelelwa phambi kokuba zivuthwe. Ziluhlaza, umbala ufana kakhulu nee-ertyisi kunye neembotyi esizaziyo. Ivela kusapho lweembotyi kwaye ubungakanani bayo buncinci. Kwipod yesoya eluhlaza sifumana phakathi kwe-2 okanye i-3 yeenyanda zenyosi kwaye zinomsantsa omkhulu phakathi kwazo.
Igama, Igqunywe ziinwele ezincinci, uphawu oluya kuthathelwa ingqalelo ukwazi indlela yokwahlula kwezinye iimbotyi ezintsha.
Okulandelayo, sikuxelela ukuba zeziphi iipropathi ezintle kunye nezibonelelo zeedamame.
Ngumthombo omkhulu we Iiproteni zemvelaphi yemifuno.
Iyabonakala kumxholo wayo omkhulu kwi calcium kunye nentsimbi.
Ukutya oku ngamafutha asezantsi, ogqibeleleyo kubo bonke abafuna ukunciphisa okanye ukulawula i-cholesterol.
Ineempawu zokulwa ne-antioxidant, ngenxa yomxholo wayo ophezulu isoflavones. Ama-Isoflavones anceda abasetyhini ukuya exesheni ukugcina ulusu kunye nezinto eziphilayo.
El edamame, kugxila kwimagniziyam, isimbiwa esiphucula impilo yethambo.
Umxholo wentsimbi ephezulu kunye neeproteni ezikumgangatho ophezulu zenza ukuba kube kukutya okunako ukusizalisa ngamandla.
Inomxholo ophezulu kakhulu kwi ifayibha. Yanganye Iigrama ezili-100 ze-edamame sifumana iigrama eziyi-8 zefayibha.
Kukutya okungenagluten, ke ezo zinto zingadibani ne-gluten zinokuthatha ngaphandle kweengxaki.
Igcina eyethu amajoni omzimba omeleleyo.
Yiyo umthombo omkhulu wamandla.
Kuyacetyiswa ebantwini seswekile
Ukunciphisa iingxaki zezintso
Iyaphucula i impilo yamathambo ethu.
Ithintela i-anemia ngomxholo wefayibha ephezulu.
Edamame, njengoko isuka kwiimbotyi zesoya, ikwonyusa ii-indices zethu kwezi zinto zilandelayo:
El edamame Kulula kakhulu ukuyitya, ilungiselelwe ngokukhawuleza kwaye iziphumo ziyamangalisa. Ngexesha lokutya, umngxunya uyavulwa ngoncedo lwamazinyo okanye lwezandla, ngolwimi siqokelela iinkozo ngaphakathi kunye nomdumba ulahlwe. Yinto efana nokutya imibhobho.
Eyona ixhaphakileyo nelula zibilise emanzini anetyuwa encinci. Malunga nemizuzu emi-3 okanye emi-5. Xa sele sibilisiwe, sinokubakhapha ngeoyile kunye neetyuwa okanye iziqholo. Kwelinye icala, singazisusa iinkozo size sizongeze kwisaladi, okanye sizigalele epanini ngesosi encinci yesoya kunye negalikhi egayiweyo.
Into eqhelekileyo kukuthatha njenge-aperitifInikwe yonke imidumba ebilisiweyo kwaye siyitya ngokungathi yimibhobho. Bangathathwa bushushu okanye babanda. Incasa yayo ithambile kwaye idibanisa nenani elikhulu lokutya.
Okwangoku, emva kokuduma koku kutya, sinokufumana i-edamame kwiindawo ezahlukeneyo nakwiimarike ezaziwa kakuhle kubo bonke. Singayifumana kwiifomathi ezahlukeneyo, ezintsha, iimbewu, zilungele ukutyiwa okanye zifriziweEmva koko sikuxelela ukuba ungakufumana phi oku kutya kumnandi.
En IAmazon eSpain Imbewu ye-edamame inokuthengwa ukuze ilinywe.
Ivenkile enkulu I-Lidl Siyifumana ifriziwe, ngefomathi engama-400 yeegrama.
En IMercadona, enye yevenkile ezinkulu zaseSpain kwaye apho kungokunje beziphelelwe ziindawo zokugcina, siyifumana izixa ezingama-500 gram kwicandelo eliqanduselweyo.
En Carrefour Siyifumana kwifomathi encinci, iigram ezili-100 zokulungela ukutya i-edamame, indlela efanelekileyo yokuzama ukuba awukayazi.
En Ukuya ebaleni, kule suphamakethi siyifumana ikwifomathi ye-gram engama-300 enzulu engumkhenkce.
El Inkundla yesiNgesi, Sithengisa i-edamame ngobuninzi be-500 gram, kwaye uya kuyifumana kwisebe eliqanduselweyo.
La SirenLe suphamakethi, ithengisa kakhulu iimveliso ezibandayo, ithengile i-edamame, ngeefomathi ze-400-gram.
Edamame Inexabiso eliqala ukusuka kwi- € 1,80 ukuya kwi-4 euro, Kuxhomekeke kuhlobo kunye nobungakanani.
Ukuba uhlala kwidolophu ephakathi, ngokuqinisekileyo uya kufumana ukhetho lokufumana i-edamame, nakweyiphi na ifomathi. Nangona kunjalo, ukuba awuyifumani, unoku-odola kwi-Intanethi, okwangoku kukho amaphepha amaninzi ewebhu aneevenkile ezikwi-intanethi ezisinika iimveliso zazo ezintsha kwaye sizithumele kuthi ngexesha elifutshane.
Qhubeka uzame oku kutya kunempilo kunye nendlela esefashoni ngayo. Inketho efanelekileyo yokutya okulula, Ayinamakhalori kwaye imnandi. Dlala ngeendlela zakho zokupheka kwaye uyongeze ngendlela onomdla ngayo. Uqinisekile ukuba unike izitya zakho ukubamba okugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Sikuxelela ukuba yintoni i-edamame, iipropathi zayo kunye nendlela ethathwa ngayo
Iingcebiso ze-4 + 1 zokupheka nge-CBD